देवकोटीय : भानुभक्तीय- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
देवकोटीय : भानुभक्तीय
मंसिर १५, २०७५ डा. राजेन्द्र भण्डारी
काठमाडौँ — घरीघरी आँखामा नाचिरहनेत्यो घँसिनी मुनाको गीतउसको टल्केको कचियात्यत्तिकै अलपत्र थिए ।
घरीघरी आँखामा नाचिरहने
त्यो घँसिनी मुनाको गीत
उसको टल्केको कचिया
त्यत्तिकै अलपत्र थिए ।
सुइँकुच्चा ठोकिसकेका थिए
उसलाई बेहोस छोडेर ।
चराले बोकेरै उड्छ आफूसँग आकाश
मदनले बोकेरै हिँड्छ भाग्य
यस्तै के के सम्झिँदै
कतार एयरवेजमा चढाएर
सिमसार आँखा बोकी
सिधै गए देवकोटा वीर अस्पताल
जहाँ ऐय्या–आत्थुहरुसँग जुझ्दै छे मुना ।
एक हूल भोका लिंगहरूको आक्रमणमा परेकी
दुखिरहेको छ एउटा सिंगै समय ।
थुप्रै सिलाइ परेको छ स्वाभिमानमा ।
उसका विस्फारित आँखाले भन्दै छन्
लौन नि कसले सल्काउने हो डढेलो
जूनघामबिनाको यो लिंगवनमा ।
कहिले आउला त्यो भानुभक्त
‘लोकको हित’ गर्न ।
प्रकाशित : मंसिर १५, २०७५ ०८:४३
मिडियामा मी–टु !
लामो समयदेखि पत्रकारितामा लागेका महिला पत्रकारका अनुभव सुन्दा लाग्छ, उनीहरू बोल्ने हो भने यसमा कैयौं ‘ठालु’ को नाम मुछिन्छ । पत्रकारितामा भर्खरै लागेका महिलाले पनि यस्ता घटनाको सामना गरी पत्रकारिता नै छोड्नुपरेका घटना पनि छन् तर गुपचुप ।
मंसिर १५, २०७५ शिल्पा कर्ण
काठमाडौँ — साढे ३ वर्षअघिको कुरा हो । महिला पत्रकारका लागि आयोजना गरिएको एउटा तालिममा हामी मातातीर्थमा थियौं । देशका विभिन्न जिल्लाबाट उपस्थित सहभागीबीच अनौपचारिक छलफल पनि भए । महिला पत्रकारलाई काम गर्न हुने अप्ठ्याराका विषयमा धेरै कुरा आए । काम गरिराखेको ठाउँमा हाकिम आई ‘कस्तो गाह्रो भएको होला है’ भन्दै काँधमा हात राखेर थिचिदिने गरेको चितवनकी एक जना रेडियोकर्मीले अनुभव सुनाइन् ।
‘हैन सर ठीक छ, मलाई त्यस्तो गाह्रो केही छैन,’ भन्दा ‘मलाई थाहा छ, लामो समय कम्प्युटरमा बस्दा कस्तो गाह्रो हुन्छ । म यतिका वर्ष काम गरेको मान्छेले बुझ्छु नि’ भन्ने गरेको बताइन् । अब आफूले चाँडै रेडियो छोड्न लागेको पनि उनले भनेकी थिइन् । भोगाइ बाँड्ने कार्यक्रममा उपस्थित कसैलाई त्यसबेलामी–टुको बारेमा थाहै थिएन । अचेल मी–टु चर्चा भएका बेला म उनलाई सम्झिरहेछु ।
साथीभाइ भेटघाट हुँदा होस् या कलेज, कार्यालय । फेसबुके साथीसम्मले कुराकानी सिलसिलामा केही रमाइलो टिप्पणी गरेर ‘फेरि तिमीले मी–टु लाइदिने त होइन नि’ भन्छन् । ख्यालख्यालमै गरिने यस्ता कुराले ‘मी–टु’ देखिको डर र यसको शक्तिबारे सबै जानकार भइसकेका छन् जस्तो लाग्छ । विभिन्न क्षेत्रमा मी–टुले ल्याएको हलचल, निम्त्याएको बहस र चर्चाका साथै आरोपितमाथि सामाजिक–पेसागत कारबाहीका कुराले पीडामा परेका महिलालाई आफ्ना कुरा भन्न हौसला थपेको छ ।
तर, अर्काको आवाजलाई बल दिने पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि यस्ता कैयौं घटना छन् । लामो समयदेखि पत्रकारितामा लागेका महिला पत्रकारका अनुभव सुन्दा लाग्छ, उनीहरू बोल्ने हो भने यसमा कैयौं ‘ठालु’ को नाम मुछिन्छ । भर्खरै पत्रकारितामा प्रवेश गरेका मात्र होइन, हिंसाको यो सिलसिला निकै पहिलेदेखि चलिरहेको छ । पत्रकारितामा भर्खरै लागेका महिलाले पनि यस्ता घटनाको सामना गरी सञ्चारगृह/पत्रकारिता नै छोड्नुपरेका घटना पनि छन् तर गुपचुप । जिल्लामा केही वर्ष काम गरेको अनुभवका अधारमा भन्दा यहाँ पत्रकारदेखि डराउने अवस्था छ । उनीहरूविरुद्ध आवाज कसैले उठाउन चाहँदैनन् । बाहिर पनि र सञ्चारगृहभित्र पनि ।
भारतमा नाम चलेका पत्रकारमाथि पूर्वसहकर्मीलाई दुव्र्यवहारको आरोप र प्रमाणपछि निकै हलचल मच्चियो । पत्रकारिताको सुरुआती दिनका कुरा यति समयपछि ती महिला पत्रकारले सार्वजनिक गरे पनि उनको यो कदमले धेरैलाई हौसला दिएको छ । यद्यपि नेपालमा यौन हिंसाका सन्दर्भमा खुल्ने र कारबाही हुने क्रम निकै कम छ । नेपालमै एक महिला पूर्वपत्रकार र महानगरपालिकाका पूर्व कर्मचारीले प्रदेशमन्त्री(हाल बर्खास्त)माथि लगाएको आरोपबारे खासै चर्चा भएन । वरिष्ठ र हामीले आफ्नो आदर्श मान्ने महिला पत्रकारले समेत उबेलाका आफ्ना भोगाइ विभिन्न कार्यक्रममा सुनाउँदा मी–टुको सुरुआत निकै ढिलो भएछजस्तो लाग्छ ।
हिंसाको शृङ्खला नेपालजस्तो गरिब वा कम विकसित मुलुकमा मात्र होइन । सन् २०१३ को इन्टरनेसनल न्युज सेफ्टी इन्स्टिच्युट र द इन्टरनेसनल मेडिया फाउन्डेसनको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने उत्तर अमेरिकाका महिला पत्रकार सबैभन्दा बढी हिंसामा परेका छन् । उक्त तथ्यांकले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा साढे २६ प्रतिशत महिला पत्रकारले शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्नुपरेको देखाएको छ । बाहिर भएका यस्ता हिंसाका घटनाबाहेक भित्र वा कार्यस्थलमा भएका हिंसाका घटना निकै कम आउँछन् ।
पत्रकार क्षमता वृद्धिका लागि आयोजना गरिने महिला लक्षित कार्यक्रममा औपचारिक सेसनमा समेत विषयवस्तुसँग सम्बन्धित र असम्बन्धित विभिन्न कुराहरूमा छलफल हुन्छ । यस्ता कार्यक्रम अन्य जिल्लाका पत्रकारसँग भेट गरी सुखदु:ख सुन्ने सुनाउने राम्रो अवसर हुन्थ्यो । कुराकानीकै क्रममा कार्यस्थलमा हिंसाका कुरा पनि आउँछ । कार्यस्थलमा वा पेसागत कार्य सम्पादन क्रममा आफूमाथि त्यस्तो गम्भीर यौन हिंसा भएको खास याद छैन । त्यसैले म आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्छु ।
रेडियोमा दुई वर्ष काम गरुन्जेल राति ८ बजेसम्म पनि काम गरियो । राति बाहिर बस्ने गरी धेरै तालिममा सहभागी भइए पनि त्यस्ता गम्भीर हिंसामा परेको सम्झना छैन । तर, मिडियामा यस्ता यौन हिंसाका घटना कति हो कति छन् । पुरुष पत्रकारले बाहिर मात्र होइन, आफैंसँग काम गर्ने महिलामाथि हिंसा गरेका घटना पनि गुपचुप हुन्छन् । बाहिर आए भने पनि महिलाको नाम उचालिन्छ, पुरूषमाथि कारबाही हुन्न । एउटामा जागिरबाट निकालिए भने अर्कोमा काम पाउँछन्, उनीहरूको जीवनमा खास फरक पर्दैन ।
प्रिन्ट मिडियाको विकास भएको धेरै पछि मात्रै रेडियो आयो । त्यसमा पनि नेपालमा रेडियोको संख्या यति धेरै बढेको दुई दशकभन्दा थोरै बढी भएको छ । यसले धेरै महिला पत्रकारितामा आए । राजधानीका धेरै पत्रकारले पत्रकारिता प्रिन्ट माध्यमबाटै सुरु गरे पनि जिल्लामा भने धेरैजसो नयाँ पत्रकारको पेसागत यात्रा रेडियोबाटै सुरु हुन्छ । महिलाको हकमा पनि त्यस्तै छ । धेरै पत्रकार महिला प्रिन्टभन्दा पनि रेडियो, टेलिभिजनतिर छन् । रेडियोको हकमा धेरै रेडियो सञ्चालकको गुनासो हुन्छ, महिला पत्रकार टिक्दैनन् । तर, यो विषयमा बहस हँुदैन कि, महिला पत्रकारहरूलाई काम गर्न कस्तो खालको अप्ठ्यारो छ वा के ले उनीहरू पत्रकारिता वा सञ्चारगृह छोडिरहेका छन् । एक त कमै उमेरमा रेडियोमा पत्रकारिता गर्न सुरु गरेका हुन्छन्, अनुभवी हुँदैनन् । जसकारण रेडियोका ठूला ठालुले उनीहरूको श्रम शोषण गरिरहेका हुन्छन् र शारीरिक शोषण पनि । उनीहरू कम उमेरका हुन्छन् र स्टेसन म्यानेजर वा पुराना पत्रकारले त्यसको फाइदा उठाउँदै शोषण गर्न पछि पर्दैनन्, गरेका पनि छन् ।
अहिले २ नं. प्रदेशको राजधानी जनकपुरको एक स्टेसन म्यानेजर सम्झिन्छु । आफूलाई पुराना, ठूला र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भएको पत्रकार बताउने उनले आफ्नो रेडियोमा कार्यरत महिला सञ्चारकर्मीमाथि गरेको व्यवहारले महिलाले रेडियो नै छाडेका छन् । कतिले अर्को सञ्चारगृह रोजे, केही पत्रकारिताबाट टाढिइसके । उनले घरी हात समाएर माउस चलाउन सिकाउने, कहिले पछाडिबाट अँगालो हाल्नेसम्मका हर्कत गर्न पछि परेनन् र अहिले २ नं. प्रदेशमा महिला पछाडि पर्नुको कारणबारे रिपोर्टिङ गरेर बसेका छन् । लाज पचाएर अझै आफू ठुलो पत्रकार भन्दै हिँड्छन् । उनीबाट प्रताडित २/३ जना चिन्छु । तर, उनीहरू खुल्दैनन् । किनकि विवाहित छन्, घर परिवारबाट साथ पाउँदैनन् ।
कतिपयले नयाँ बाटो रोजिसकेका छन्, फेरि पुराना कुराकोट्याउन चाहँदैनन् ।
विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा महिला पत्रकारलाई लैजाने, विभिन्न तालिममा देश वा देशबाहिर जाने मौका दिने अनि पछि त्यसको ‘मलाई के फाइदा भयो’ भनेर खोज्ने पनि उत्तिकै छन् । ‘मौका दिएको’ बदलामा ‘अवसर खोज्ने’ पुरुष पत्रकारले महिलालाई निरुत्साहित बनाएका छन् । तर, अझै कुनै हीनताबोध छैन आफ्नो हर्कतप्रति । रेडियो भनेको यस्तो स्थान हो जहाँ चिच्याउँदा पनि आवाज बाहिर जाँदैन । एक जना महिला पत्रकारको अन–एयरमै सहकर्मी पुरुष साथीले जथाभावी छुँदा रेडियोमा आवाज जाला भनेर बोल्न नसकेको घटना यस्तै तालिमको एक कार्यक्रममा सँगै बसेको रात सुनेकी छु । रेडियोको प्राविधिक पक्ष र बनावटले गर्दा भित्र केही भयो भने त्यसको आवाज बाहिर आउन सक्दैन । मधेसको एक जिल्लामा रेडियोकर्मीमाथि आफ्नै महिला सहकर्मीको बलात्कार र हत्यासम्मको अभियोग लागेको थियो । पछि घटना साम्य भयो तर कारबाही केही भएन । प्रहरीको अनुसन्धान आधामै रोकियो, फाइल बन्द भयो । यस्तोमा कुन बाबुआमाले आफ्नी छोरी पत्रकार होस् भन्ने चाहलान् ?
अचम्म त के लाग्छ भने, यो मान्छे खराब छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पुरुष पत्रकारले पनि बाइकट गर्नुको साट्टो त्यस्तासँग काँध मिलाई हिँडिरहेका हुन्छन् । पत्रकार भनेपछि सबैसँग चिनजान हुन्छ, त्यसकै आडमा धेरै घटना बाहिरै आएका छैनन् । सञ्चारगृहभित्र र बाहिर दुवैतिरका । रेडियोकर्मी एक महिलालाई चिन्छु जो अहिले पनि पत्रकारितामै छिन् । स्टेसन म्यानेजरले यौन हिंसा गरे, निकै निरुत्साहित भइन् । अहिले राम्रै स्थानमा रेडियो पत्रकारिता गरिरहेकी छन्, पुरानो घटना याद पनि गर्न चाहँदिनन् । नेपालगन्जमा एक महिला पत्रकारलाई कमेन्टमा र पछि म्यासेन्जर कलमा समेत जथाभावी बोल्ने पत्रकारलाई महासंघले सदस्यता खारेजीको धम्की दिएपछि माफी मागे । उनले आवाज उठाइन् तर यस्ता नउठेका आवाज गनेर साध्य छैन ।
यस्तै केही दिनअघि एक सम्पादकस्तरका मान्छेको राष्ट्रवादबारेको धारणालाई लिएर जनकपुरकी एक महिलापत्रकारले म्यासेन्जरको स्क्रिनसट फेसबुकमा राखिन् । यद्यपि त्यो हटाउन उनलाई निकै दबाब आए पनि उनले हटाइनन् । उनको साहसलाई धन्यवाद दिन मन लाग्छ । राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक रहेका ती व्यक्तिको निर्लज्जताको हद अन्य महिला पत्रकारले सार्वजनिक गर्ने हो भने मुख देखाउन लाज लाग्ला उनलाई सायद । तर, उनीजस्ता निर्लज्जलाई त्यसले फरक पार्छ कि पार्दैन ? म रेडियोमा काम गर्दा उनीसँग केही दिन च्याट हुन्थ्यो । ठूला लेख लेखिरहने उनले बोलाउने प्याटर्न, कुरा गराइको तरिका हेर्दा मानसिक रूपमा रोगी लाग्न थालेपछि कुराकानी हमेसाका लागि अन्त्य गर्ने निर्णय लिएँ । त्यसबेला हामी महिलाहरू हतपत खुल्दैनथ्यौं । अहिले अन्य पत्रकार महिला भेट्दा उनीसँगका पुराना म्यासेज देखाउँछन् । अचम्म त ती मान्छेको महिला अधिकारबारेको स्टाटस देखेर लाग्छ । उनी मातहत कसरी महिला रिपोर्टरले काम गर्छन् होला भन्ने सोच्छु ।
फेसबुकको इनबक्समा उनले महिला पत्रकार र बाहिरका अन्यलाई गर्लफ्रेन्ड बन्नेदेखि विवाह प्रस्ताव राख्न भ्याइसकेका रहेछन् । जबकि उनी विवाहित र एक छोरीका पिता रहेछन् । यद्यपि फेसबुकमा कतै त्यसको प्रमाण राखेका छैनन् । अश्लील गफ गर्नदेखि, छाडा गाली गर्नसम्म पछि नपर्ने उनी कसरी सम्पादकको कुर्सीमा पुगे होलान्जस्तो लाग्छ । उनको व्यवहारबाट वाक्क भएका त आधा दर्जन महिला पत्रकार त अहिले मेरा साथी नै छन् । बाहिरका महिला पनि उनीबाट प्रताडित रहेछन् । यस्ता मान्छे सम्पादक कसरी बन्न पुगे भन्ने कुराकानी हुन्छ हामीबीच । र निष्कर्ष हुन्छ, हामीले आवाज नउठाएर । सायद पहिले आवाज उठाएको भए उनलाई सम्पादकको पद दिने सञ्चारगृहलेसोच्थ्यो कि ?
पत्रकार महासंघको सदस्यता दिलाइदिन राजनीतिक खेल मात्र होइन, आफ्नै सञ्चारगृहकी महिला पत्रकारलाई ‘समय बिताउन’ प्रस्ताव गर्ने पुरुष पत्रकार हामीमाझै छन् । त्यही ‘समय नबिताउँदा’ अवसरबाट वञ्चित भएका, क्षमता अभिवृद्धिका तालिम नपाएका, पत्रकारको पहिचानसमेत नपाएरका महिला पत्रकार चिन्छु । विभिन्न तालिमका बहानमा बाहिर जाँदा एउटै कोठामा बसौं भन्नेसम्मका पत्रकार हामीमाझै छन्, समय समयमा भेट भइरहेकै हुन्छ ।
गत वर्ष नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नलिस्ट्स (आईएफजे) को सर्वेक्षणले ४८ प्रतिशत महिला पत्रकारले कार्यस्थलमा लैंगिक हिंसा भोग्ने गरेको देखाउँछ । ५० देशमा गरिएको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो जसमा ८५ प्रतिशत घटनामा पीडकमाथि कुनै कारबाही गरिएको/भएको छैन । पीडकमा ४५ प्रतिशत बाहिरका अर्थात् नेता, स्रोत, श्रोता, दर्शक तथा पाठक हुने गरेका छन् । कार्यस्थलभित्रैका पीडक वरिष्ठ अधिकारी वा सिनियर पत्रकार ३८ प्रतिशत भेटिए ।
वरिष्ठ भनिएकै पत्रकारबाट महिला पत्रकारका विषयमा यदाकदा गरिने टिप्पणी सुनेर म गम खान्छु । ‘आज बाहिरै बस्न मिल्दैन, तिम्रो बडी कति स्लिम र सेक्सी भन्नेदेखि टेलिफोनमा कुरा गर्दा के कपडा लगाएकी छौ’ भन्नेसम्मका पत्रकार । भेटघाट र चिया गफमा धेरै महिला पत्रकारले सुनाउँछन्, यस्ता भोगाइ र यौन हिंसामा परेको कुरा । किन विरोध गर्न सक्दैनौं त ? जवाफ एउटै हुन्छ, के नै हुने हो र ? महिलाले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि उसको चरित्रसँग जोडेर उल्टै कुरा काट्दै हिँड्ने पत्रकार पनिभेटिए, बजारमा ।
अहिले म नै वा हाम्रा साथी बिस्तारै बोल्दै छन् । तर, खुलेर र मान्छे तोकेर बोल्न सकेका छैनन् । बर्दियाकी सांसद विमला बीकेले एक कार्यक्रममा भनेको कुरा याद आउँछ, ‘हिंसाको कुरा गर्दा, हामी हाम्रो गाउँमा फलानोमाथि यस्तो हिंसा भइरहेको छ, चिलानालाई यस्तो गर्‍यो भन्छौं । तर, आफूले रातभरि कुटाइ खाएको भए पनि, त्यो दु:ख भन्दैनौं ।’ एकदमै सही लाग्यो उनको कुरा । महिला पत्रकार पनि अरूमाथि हिंसा र अन्याय भएको आवाज उठाउँछन् तर आफैंमाथि भएको हिंसाबारे अझसम्म बोल्न सकेका छैनन् । सोही कार्यक्रममा सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नीतु पण्डितले भनेकी थिइन्, ‘हामी अहिले बोल्छौं किनकि अहिले सुन्नेछन् । सुन्ने नभएको भए हामी बोल्न सक्दैनथ्यौं ।’
तर, बलात्कारमा परेका महिलाको उजुरी दर्ता गर्नसमेत प्रमाण खोज्ने यो देशमा, यस्ता ‘स–साना हिंसाका कुरा’ मा कसरी न्याय पाउलान् महिलाहरूले ? यो महिला मात्रै नभएर देशकै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । यौन हिंसाको आरोपमा मुछिएपछि विभिन्न देशमा पदबाट राजीनामा वा घटनाका विषयमा स्पष्टोक्ति आएका छन् । तर, नैतिकताको खडेरी परेको नेपालजस्तो मुलुकमा हामीले त्यति आशा गरिहाल्ने अवस्था छैन ।
अर्कोतिर सामाजिक सञ्जाल (विशेषगरी ट्विटर) मा धेरैले ‘पुरुषलाई फसाउन महिलाले मी–टुको आरोप लगाउने गरेको’ टिप्पणी वास्तवमै दिक्कलाग्दो छ । ‘मन परुन्जेल सबै सहन्छन् अनि मन पर्न छोडेपछि हिंसा भयो भन्छन्,’ भन्ने आशयका उनीहरूको अभिव्यक्तिपछि लाग्छ, इच्छा र हिंसाबीचको फरक बुझ्न सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालका त्यस्ता ‘हल्का’ टिप्पणीले नेपालमा मी–टुलाई कमजोर बनाएको छ । एकथरी मानिसको बmुझाइ छ, मी–टु महिलाको मात्रै विषय हो । यो गलत बुझाइ नहटेसम्म नेपालमा मी–टु अभियान प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
एउटा सत्य के हो भने, यौनका सन्दर्भमा नेपाल त्यति धेरै अगाडि बढिसकेको छैन कि, पुरुषहरू पनि यौन हिंसामा परून् । अझै पनि यौनलाई पुरुषले इन्जोय गर्ने र महिलाले पीडा भोग्ने विषय ठानिन्छ । त्यसकारण यस्ता घटनाबाट पीडित बढी महिला नै छन् । मी–टु महिला र पुरुष दुवैको विषय हो । अझ भनौं यो सिंगो देशको विषय हो । पीडकलाई कडा कारबाही र पीडितलाई चाँडो न्याय मिल्ने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्ने हो भने गुपचुप रहेका थुप्रै यौन हिंसाका घटना मी–टु अभियानमार्फत बाहिर आउनेछन् । आशा गरौं, समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा हिँडेको सरकारले यौन हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि विशेष कदम चाल्नेछ ।
समाज विकासका लागि दुवै पांग्रा उत्तिकै बलियो र बराबर हुन जरुरी हुन्छ ।
पत्रकार होस् वा अन्य कोही, कार्यस्थलमा वा कोही महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेको छु, जस्तो लाग्छ भने समयमै माफी मागिहाल्नुस् । व्यक्तिगत रूपमा भेटेर वा सामाजिक सञ्जालमार्फत नै भए पनि । नत्र भोलि तपाईंको नाममा पनि ‘ह्यास्ट्याग मी–टु’ वाला पोस्ट नआउला भन्न सकिंदैन । ढिलै भए पनि महिलाले आवाज उठाउन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो अभियानलाई गम्भीरतापूर्वक लिने जमात बढ्दै छ ।
प्रकाशित : मंसिर १५, २०७५ ०८:४२
'विधेयकले अझ पछाडि धकेल्छ'
छिमेक : स्तब्ध भूस्वर्ग
यात्रा : जोखिम उठाएर अमरनाथ
आँधीमय दिनका स्मृति
व्यङ्ग्य : कर, कर र करकर
पढ्नलाई छेक्दैन उमेरले
कश्मीरबारे किन अन्यमनस्क ?
सम्पादकीय श्रावण २६, २०७६
भारतले जम्मु–कश्मीरमा केन्द्रशासन लागू गर्दै करिब ४६ हजार सुरक्षाकर्मी उतारेर सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा बन्द गराएको एक साता पुगेको छ । यसका लागि उसले संविधानको त्यो धारा...
आहुति श्रावण २६, २०७६
मानव अधिकार अभियन्ता कृष्ण पहाडीले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘राजतन्त्र खोल्लिएको अन्डाजस्तै भएकाले फालिएको हो, फेरि त्यो सडेको अन्डालाई भान्सामा ल्याउन सकिँदैन ।’ शिरदेखि पाउसम्मै...
काङ्ग्रेसको अबको बाटो
प्रकाशशरण महत श्रावण २६, २०७६
अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ । यो बैठक धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ र यसले धेरै विषयवस्तुलाई समेटेको छ । यसले राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रमको समीक्षा...
आर्थिक स्थायित्व र मौद्रिक नीति
चिन्तामणि शिवाकोटी श्रावण २६, २०७६
राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यहरूको वस्तुगत विश्लेषण, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी एवं सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आव...
विश्वविद्यालयमा 'बिर्ता उन्मूलन’
साधना प्रतीक्षा श्रावण २६, २०७६
विभागीय प्रमुखको रिक्तताका कारण आफ्नो काम अघि बढ्न नसकेको रिसले झोक्किँदै बाहिरिएका विद्यार्थीसँग विभागको ढोकैमा मेरो जम्काभेट भयो । सामान्य औपचारिकतापछि उनले सोधे, ‘अहिलेसम्म पनि विभागीय...
अभि सुवेदी श्रावण २५, २०७६
हिजोआज नेपालमा हामी राजनीतिमा लोकतन्त्र र समाजवादका चर्चा गर्छौं । त्यो सिद्धान्तको रूपमा गरिने विषय हो । सबैतिर यिनै स्थुल विषयका छलफल हुन्छन् । नेपालको संविधानले नै यो...
मोहम्मद हानिफ श्रावण २५, २०७६
पाकिस्तानी बालबालिकालाई विद्यालयमा काश्मीर हाम्रो ‘गर्धनको नशा’ हो भनेर पढाइन्छ । यस्तै भारतीयहरू काश्मीर आफ्नो ‘अटुट अंग’ हो भन्ने विश्वास गर्छन् । उर्दु र फारसी कविताहरूमा काश्मीरको...
डा. प्रकाश बुढाथोकी श्रावण २५, २०७६
हाम्रो ६२.६८ प्रतिशत जनसंख्या १५–६४ वर्ष अर्थात उत्पादनशील उमेरका भएकाले यो युग युवाहरूको भन्न सकिन्छ । २०८४ मा नेपाल प्रौढ र ३५ वर्षपछि वृद्धहरूको देशमा प्रवेश...
मञ्जुरी विना हुने अनलाइन हिंसा
रीताश्री बरामु श्रावण २५, २०७६
हामीकहाँ सम्बन्धमा ‘कन्सेन्ट’ अर्थात् सहमति र मञ्जुरीका कुरा त्यति बहसमा आउने गर्दैन । प्रेम सम्बन्धलाई त्यति खुला रूपमा नस्वीकार्ने र यौनलाई अश्लील मानिने हुँदा यस्ता विषयको...
जस कम, जिम्मा धेरै
उपेन्द्र पौडेल श्रावण २५, २०७६
केही दिनअघि एउटा दुस्वप्न जस्तो समाचार आयो— कञ्चनपुरका लिटिलबुद्ध एकेडेमीमा कक्षा १२ मा पढ्ने सुरज लेखकले सुसाइड नोटमा प्लस टु कोअर्डिनेटर हरिलाल जोशीलाई दोषी ठहराउँदै आत्महत्या...